काठमाडौं उपत्यकामा सीडीओहरूको बैठक बस्दै : स्मार्ट लकडाउनबारे निर्णय हुदै - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार काठमाडौं उपत्यकामा सीडीओहरूको बैठक बस्दै : स्मार्ट लकडाउनबारे निर्णय हुदै
पछिल्लो समय कोरोना भाईरसको संक्रमण फेरी तीव्र रुपमा वृद्धि भैरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। देशका मुख्य शहरहरुमा संक्रमणसर अझै बढी पाईएको छ।
कोरोना संक्रमणदर बढ्दै जाँदा काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’को तयारी गरिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।
आज तीन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्दै छ । स्मार्ट लकडाउनको प्रकृति र प्रावधानबारे गृह मन्त्रालयसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए ।
‘‘गृह मन्त्रालयसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । यसको प्रकृति र प्रावधानबारे छलफल भइरहेको छ । आइतबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) र सोमबार गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने छलफल भइसकेको छ । दिउँसो बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्छौँ,” उनले भने ।
आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सीसीएमसीसीले स्मार्ट लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेलगायत १३ वटा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले आजदेखि देशभरका विद्यालयहरू बन्द गराएको छ ।
सोमबार गृह मन्त्रालयले देशभर सबै किसिमका भेला, सम्मेलनमा प्रतिबन्ध लगाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
Previous articleलुम्बिनी प्रदेश सरकारको बैठक : यस्ता भए निर्णयहरु
Next articleपूर्वराजाद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण, सिंहदरबारअघि लाग्यो गणतन्त्र मुर्दावादको नारा